Yakanakisa ICO Chinyorwa 2022 | Wepamusoro Rondedzero yeICOs Nyevero uye Ongororo | ICO Chinyorwa Chebasa
ICO Chinyorwa Pamhepo - Nha. 1 ICO Chinyorwa Platform mu2022
ICO Chinyorwa Pamhepo imwe yeiyo zvakanakisa 2022 ICO zvinyorwa zvemawebhusaiti iyo inowanzo gadziridza nezve akanakisa ICOs ekudyara mairi. Unoda kuendesa yako ICO pane yedu chikuva tinya iyo SUBMIT ICO bhatani pazasi:
Akanakisa ICO Kuisa mari mu2022 - Wepamusoro ICO Chinyorwa 2022
Solidus Technologies yakavambwa muna 2017 sesangano reEthereum migodhi uye ikozvino iri kutanga Solidus Ai Tech. Solidus iri kupedzisa kuvaka kwemukati kweEco Friendly High Performance Computing (HPC) Data Center & Infrastructure-as-a-Service (IaaS) chikuva uko Vakuru veHurumende, Megacorps, SMEs & Professionals vachakwanisa kutenga Artificial Intelligence masevhisi pasina mutsetse vachishandisa iyo. worlds yekutanga AI utility token (AITECH). November 18, 2021 April 30, 2022 9.9
Quarashi inopa masimba ekutanga kuisirwa vese mune imwechete chikuva chinotarisana ne: Yakavanzika Chat, Yakagadziriswa Shanduko, IDO Launchpad, Blockchain Yakapindirana Multi Crypto chikwama. February 15, 2022 March 15, 2022 9.9
Vadivelu Comedy RastaSwap
RastaSwap chirongwa chinofambiswa nenharaunda. yakagadziridzwa kuve #1 Crypto Cannabis Ecosystem uye bhiriji pakati pechinyakare stock market uye crypto. December 21, 2021 March 1, 2022 9.4
Revenue Coin (RVC) vanobata mari kumakambani epamusoro-tekiniki kuyera kushambadzira, kutengesa, uye zviitiko zvehukama. Startups inogamuchira mari inogovera kusvika ku10% yemari kune yakatengwa kutenga yeRVC kubva kumusika, ichideredza kugovera uye kuwedzera kuwanda. October 15, 2021 December 5, 2021 9.8
YearnNFT Finance ndeye BSC yakavakirwa NFT Musika kugadzira uye kutengesa NFT's. YFNFT ndeye yakaderera inopa BSC yakavakirwa chizvarwa tokeni November 19, 2021 April 30, 2022 9.1
BERTINITY inokanganisa hunyanzvi uye izere isingazivikanwe uye Hapana KYC yemari blockchain ecosystem. BERTINITY ecosystem ine zvikamu zvikuru zvishanu, zvinosanganisira crypto mubhadharo gedhi, centralized exchange, ICO launchpad, yakatemerwa pasi rese chengetedzo tokeni stock market & yemuno mari. October 20, 2021 January 17, 2022 9.2
Yese-mune-imwe Live Kutenderera paBlockchain-Yakavakirwa Platform February 1, 2022 April 30, 2022 9.6
Pawa is a Multifunctional Utility Token. Inopa sarudzo-yekucheka-mutengo kune varidzi vemidziyo uye avo vasina kutenga chero ASIC muchina parizvino. Iyo zvakare ichave chikamu chikuru cheHashEX uye iyo BeMine staking protocol. November 8, 2021 January 31, 2022 9.5
AgroDeal Lab iBlockchain Agriculture chikuva chinobatanidza varimi kuMusika, Mari, Zvishandiso, uye Zviwanikwa January 1, 2022 Dai 31, 2022 9.2
Tiri kugadzira kutamba kuti tiwane (p2e) crypto mitambo papolygon (matic) network.we kuvhura nft kushambadzira uye staking matic sezvakarongwa. January 15, 2022 January 22, 2022 9.2
Frodo Tech imari blockchain ecosystem uye nhengo yeBlockchain Association yeNew Zealand (BANZ). Isu tinopa vatengi vedu masevhisi emari pasi rose pasina chero muganhu wedzinza kana dunhu. Yakaongororwa necertik. December 1, 2021 February 28, 2021 9.8
MyCryptoCity mutambo wenhare uchishandisa Solana zvivakwa. MyCryptoCity mutambo wekutevedzera unobvumira vatambi kuti vawane MYCTY tokeni vachishandisa Solana zvivakwa. Mutambi anozvisarudzira ega nekuita akawanda zviito uye zviito kubva pane manejimendi ekutonga. Mutambi anozvisimudzira nekuyedza kushandisa zvakanakisa sarudzo dzakawanda, sekutsvaga, kushandisa zviwanikwa, zvibvumirano, manejimendi eguta. Anogamuchira chiratidzo cheMYCTY semubairo. January 1, 2021 January 26, 2022 9.0
Iyo inokurumidza smart zvibvumirano chikuva. Cheetah protocol iri kuvaka yakaderera mubhadharo smart zvibvumirano blockchain chikuva chinokwanisa kuita 110000+ kutengeserana pasekondi. February 1, 2022 March 1, 2022 9.1
Lucrosus Capital iDecentralized Venture Capital inopa mabhenefiti emasangano kune mumwe munhu anoisa mari kuburikidza nechiratidzo chayo - $LUCA. January 17, 2022 April 17, 2022 9.3
Brickken ndeye blockchain yakavakirwa tokenization papuratifomu inobvumira kuita tokenize mabhizinesi uye midziyo, ichipa vanoisa mari mikana yekuwana mari isingaite. September 1, 2021 February 28, 2022 9.2
Veritise inopa ongororo, kuzivikanwa, kuunganidzwa kwedata uye kuongorora masevhisi emakambani nevanhu vamwe nevamwe. Pakati pezviitiko izvi ndeyeVeritise Enterprise-giredhi blockchain yekugona kwayo kushandura uye kuchengetedza data zvakachengeteka uye zvisingachinjiki. September 3, 2021 December 31, 2021 9.8
Yekutanga IDO & IGO Launchpad ine yakavanzika yekutengesa kupinda paBSC (Binance Smart Chain) inotarisisa chete pane yakaderera marketcap yekutanga mapurojekiti. January 1, 2022 January 31, 2022 9.1
Kushanda takanangana nekugadzirwa kwedecentralized finance ("DeFi") ecosystem inotongwa ne "VGT" (Vingt) tokeni nechinangwa chekuzadza mapundu munzvimbo iripo yeDeFi. January 1, 2022 April 30, 2022 9.6
ANB kana Access Next Blockchain is Layer 2 IBFT Protocol uye Bonsai Inoedza Data Architecture. January 5, 2022 February 5, 2022 9.1
Bamonyo ndiyo cryptocurrency yeprojekiti yakagadzikana yehotera inogadzirwa nedzimba diki dzakangwara: Tiny Hotels. Iyo yekushandisa tokeni Bamonyo ndiyo chete nzira yekuwana masevhisi ese e10,000 mahotera atiri kuronga kuvaka kubva muna 2022. November 1, 2021 December 31, 2022 9.6
Ownex (yake) idecentralized crypto token yakavakirwa paBinance blockchain. Vepamusoro mazana mashanu varidzi vetokeni (varidzi) vachawana purofiti migove kubva pamakumi matanhatu muzana eiyo ownex.io purofiti, yakagovaniswa zvinoenderana nemapoinzi avo. October 17, 2021 April 30, 2022 9
Iyo GHA ecosystem inosanganisira kurima kwakaringana, mepu yeminda, maIoT sensors, vertical farming system, njere dzenzvimbo, software yekutonga zvirimwa, uye humwe hunyanzvi hwekurima neakagoverwa ledger tekinoroji (DLT) uye blockchain kurima mune zvekurima. Isu tine mukana wakasarudzika wekuvandudza kushanda zvakanaka, pachena, uye kuvimba mukati mehemp-agriculture supply chain. October 26, 2021 December 9, 2021 9.7
KIND tokeni yakagadzirirwa kutevedzera kutenga nekutengesa madhaimondi pamhepo. Ichi chiratidzo chenhoroondo! Chinangwa chekugadzira ichi chiratidzo ndechekuti kohinoor diamond haisi chidimbu chepasi chete. Muchokwadi, kune akawanda awo muchimiro chematani munyika. Uye vanhu vese vanogona kuchengeta yakawanda yedhaimani iri rinokosha muchikwama chavo. October 20, 2021 December 5, 2021 9.4
Epsilon inharaunda inotungamirwa, yakachengeteka paruzhinji, uye yakavhurika yekutsvaga injini. Epsilon ine pachayo yakasarudzika chikwama uye yakatemerwa exchange. Iyo inomhanya pane iyo Binance Smart Chain chikuva uye iri BEP-20 chiratidzo. September 4, 2021 December 13, 2021 9.5
Chinangwa chedu chikuru ndechekushandura mafungiro emunhu uye kuronga hupenyu hwavo, kuwedzera tarisiro yehupenyu, kuchengetedza hupenyu hwehupenyu pakukwegura. December 9, 2021 December 31, 2021 7.5
Dhabicoin ndeye seti yemadhijitari emidziyo yekubatanidza akawanda manetwork mune imwechete dhijitari ecosystem iyo inobvumidza vashandisi kutaurirana, kudzidza, kubhadhara, uye kuita zvakasiyana siyana zvimwe zviitiko. Chinangwa chayo ndechekusimudzira hupfumi hweUAE uye kugadzirisa misika yepasi rose. September 24, 2021 October 25, 2021 9.6
Coinjoss inovavarira kupa vashandisi vane musono ruzivo mukugadzirisa kwavo cryptocurrencies. Coinjoss izere ecosystem iyo inotanga neayo yekukurumidza kuchinjanisa chikuva, ichitarisa pane iri nyore kushandisa interface kune vashandisi kutengesa yavo cryptocurrencies ine yakanyanya mwero pamusika. October 15, 2021 November 30, 2021 9.6
Nexxus Mibairo inopa yakasarudzika nharaunda mushandirapamwe wekushambadzira mhinduro iyo inosimudzira nharaunda yese. Inobatsira vemunharaunda vanopa rubatsiro uye asiri-purofiti masangano kubhadhara kwavo akakosha magariro zvikonzero neakaremerwa chisingaperi fundraiser iyo inoisa mari mubhengi ravo kubhengi vhiki rega kubva kune vatengi vanoramba vachitenga. January 16, 2020 January 22, 2020 7.8
2local inozvipira kuita hunyanzvi uye bhizinesi rakachengetedza nekutarisira nharaunda nemamiriro ekunze, basa rakanaka, uye kukura kwehupfumi. Nezve izvi, 2local inoda kupa kune nyowani kudyidzana kwepasirese kwakakosha kuzadzisa zvinangwa zveUN. Mukuwedzera, chiito chinodiwa nemunhu wese! October 17, 2019 December 31, 2019 9.9
Encores yave kuda kuchinja iyo yemhando-nzira-yemari-kuyerera mafungiro uye kugovera patsva mabhenefiti kumashure pakati pevashandisi nekuvapa mubairo wekutsvaga paInternet kana kuita mamwe mabasa akareruka, senge pasocial network, kushambadzira, nezvimwe. October 1, 2019 Dai 31, 2019 7.5
Kuunza Robinhood. Kuisa kuvimba kumashure mukubhejera. September 14, 2019 February 2, 2020 8.9
Flas Exchange ipuratifomu yakazara yekutengesa iyo inopa akasiyana siyana eadhijitari zvinhu. Seyakachengeteka, yakavimbika uye epamberi yedhijitari midziyo yekutengesa chikuva chakagadziridzwa kune hunyanzvi hwekutengesa, Flas Exchange ichagadzira suite yezvakakwira maficha kusangana neakasiyana uye akaomarara anodikanwa emahunyanzvi nemasangano. November 8, 2019 February 9, 2020 8.3
GRAYLL inoparadzirwa Ledger Technology, AI uye Machine Kudzidza kunoiswa kune algorithmic yezvemari system iyo inogadzira exponential purofiti otomatiki, inowanikwa kuburikidza neyakareruka mushandisi inoshamwaridzika nhare & webhu App. Isu takatarisana nedhijitari aseti uye tokenized midziyo yeasset. Iwo masisitimu anogona kushandiswa kune chero chinhu, semuenzaniso zvigadzirwa, hunyanzvi, zvivakwa, mamiriro emamiriro ekunze, magariro enhau mamiriro uye zvichingodaro. July 1, 2019 February 17, 2020 9.1
HiveNet ichapa mhinduro yehunyanzvi kushandisa idzi nguva dzemakomputa dzisina basa nekuvaka yakagoverwa gore komputa network. Izvi zvinogonesa varidzi vemakomputa kuti vaite purofiti kubva panguva dzisina basa dzemakomputa avo September 24, 2019 November 23, 2019 7.9
Mindsync ipuratifomu uye nharaunda yepasirese yevanogadzira michina vanodzidza, masayendisiti e data uye akashandisa AI nyanzvi. Iyi nharaunda ichakwanisa kushandira pamwe nekutora chikamu mumakwikwi pakati pevanhu nezvikwata kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana. March 1, 2019 April 30, 2021 10.8
Pawtocol LLC, Delaware limited dhizimendi kambani ("Pawtocol", "isu", "yedu", "isu") inovavarira kutora indasitiri yekuchengetedza zvipfuyo muye blockchain zera nekugadzira chikuva chine hupfu-hwakanangidzirwa hupfumi uye ecosystem. Iri bepa rinoratidzira chiono chedu nehungwaru seri kwePawtocol uye nei tiri kutora chirongwa ichi kumusika, pamwe nekufambira mberi kwedu kusvika parinhasi uye nei tiri timu chaiyo yekuita. July 1, 2018 December 31, 2018 7.9
SynchroBit ™ ndeimwe yemapurojekiti makuru eiyo module yemari yeSynchroSphere® ecosystem, iyo inopa musana wezvehupfumi kune mamwe mapurojekiti nema module ecosystem. Ipuratifomu inozobatanidzwa zvizere nemamwe mapuratifomu ezvemari eSynchroSphere® kugadzira musono wevatengi ruzivo uye nekupa vashandisi nharaunda ine zvibereko, yakarurama, uye yakachengeteka yebhizinesi inoenderana necha blockchain tekinoroji uye cryptocurrencies. August 1, 2019 December 28, 2019 8.2
TecraCoin inoronga kusimudzira kweTecra Investment mune ramangwana. TecraCoin inochengetera kodzero yekushandura zvirongwa izvi kana kurega kuzviita pahungwaru chete. January 17, 2019 January 16, 2020 7.2
Iyo CoinCasso chirongwa chakazara uye chedemokrasi mhinduro yakagadzirirwa vanhu. Maonero edu akasiyana zvachose nekuti tinoda kuti nharaunda igone kusarudza uye kukurudzira kusimudzira kwekutsinhana kwedu neindastiri yese. Ndosaka tichipa vashandisi vedu mukana wekuva vamwe varidzi veiyo CoinCasso chirongwa. October 21, 2018 December 31, 2019 8.2
Iyo Karuschain chirongwa chine tarisiro yekubata pane akawanda makiyi ekupinza uye zvakabuditswa zveazvino anokosha simbi yekupa cheni. Iyo Karuschain chikuva chiri kuvandudzwa kunyatso kudzikisira nyaya nematambudziko anotarisana nevose vatori vechikamu mune yakakosha simbi yekupa cheni. January 14, 2020 February 14, 2020 7.2
Level01 ndeye Wenyika Yekutanga Peer kune Peer (P1P) Dhiivhu Dzinotsinhana neArtificial Intelligence (AI) Yekutengesa Matching Technology uye Settlement paBlockchain. Level2 inoshandisa blockchain uye tekinoroji ye cryptocurrency, kugadzira zvigadzirwa (sarudzo) yekuchinjana & yekutengesa chikuva uko kutengeserana kwemari mu forex, masheya, zvigadzirwa uye mari yemadhora zvinogona kuitiswa peer-to-peer hwaro, pasina chikonzero chemubatsiri broker. July 1, 2018 December 31, 2018 9.1
Iyo SaTT chiratidzo chekushandisa chinoenderana ne blockchain tekinoroji iyo inobvumidza kuchinjanisa kushambadzira uye kubhadhara kwevateereri. SaTT inodzorwa neiyo Smart Chibvumirano iyo inonyora kushambadzira kupihwa neese data rakachengetedzwa zvakachengetedzeka muEthereum blockchain. Iyo Smart Chibvumirano inogadza mamiriro ekutora chikamu mumishandirapamwe, inowanisa kubudirira, uye inovimbisa yekupedzisira kugadzirisazve. Dai 1, 2018 December 31, 2020 8.3
Gath3r inotora nzira nyowani ye-mu-browser yekuchera pamwe nekuunzwa kweinowanisa mari yemuno pamwe nemari yakabatanidzwa. Iyo GTH mari inoshanda nemazvo ese mabhurawuza nemaapp, uye haina nyaya dzeUI, nokudaro ichibvumira idzva uye dziripo mari kushandisa Gath3r's hashrate. January 9, 2020 January 11, 2020 6.3
Mhinduro yeBethereum inoshandisa tekinoroji yeBlockchain kuona yakachengeteka uye yakajeka ruzivo rwekubheja. Iko hakuna wepakati anobatanidzwa: Vatambi vanogadzira iwo mabheti, vanogadza mirau, uye vanopa iwo maricho ekuzadzisa kubhadhara. Zvibvumirano zveSmart zvinodzivirira mari uye zvinongogovana zvinokunda zvichibva pamamiriro ekubheja uye mhedzisiro. October 1, 2018 December 31, 2018 8.4
IBNIF CINEMADROM - Iyi ndiyo International Blockchain Network yeVanozvimirira maCinematographer, ayo akavakirwa pane hutsva hwetekinoroji, uye nemitemo yezvekudyidzana pakati pevose vanoburitsa mafirimu vatori vechikamu, vanyori, vagadziri, nyanzvi, vatengesi nevanoona. Pakati payo, IBNIF CINEMADROM inoshandisa tekinoroji ye blockchain February 3, 2020 April 30, 2020 6.9
MyTVchain ndiyo yekutanga yewebhu TV chikuva yakatsaurirwa kumitambo yemitambo nevatambi, uye ikozvino vazivisa kuvhurwa kweSports En France webhu chiteshi, Iyo Sports Movement terevhizheni. Iyi chiteshi yakatangwa nechirongwa cheFrench National Olimpiki uye Nhabvu Komiti (CNOSF), uye yakatsaurirwa kusimudzira zvese zvidzidziso, masangano ese nemakirabhu avo. February 29, 2020 March 27, 2020 6.1
BILLCRYPT pl inyika yakasarudzika yekubatanidza system yeBlockchain-inomiririra mahofisi (BR). Imwe chete multifunctional kwezvivakwa ichibatanidza Blockchain Vanomiririra mahofisi muchimiro cheyakagadzwa zvikumbiro pane blockchain (DApp). Ipuratifomu yakasarudzika inosanganisa ese mabhenefiti epasirese nzvimbo nenzvimbo chaiyo, inozivikanwa Internet uye blockchain. July 3, 2019 April 23, 2020 7.4
Unoda Kunyora Yako ICO futi?
Nyora yako ICO nhasi pawebhusaiti yedu uye usvike zviuru zvevanoisa mari kubva kumativi ese enyika. Tarisa yedu rondedzero uye ekusimudzira mapakeji nekudzvanya iyo Tumira ICO bhatani.
Chii chinonzi ICO Chinyorwa Pamhepo?
ICO Chinyorwa Pamhepo ndiyo nharaunda huru pane vanhu vanouya kuzonyora maICO avo Kubva 2018, isu tiri kuvandudza ruzivo nezve epamusoro echangoburwa ICO anowanikwa mumusika. Kune akawanda eICO anonyora mawebhusaiti anowanikwa paInternet asi haasi ese akachengeteka uye akavimbika kuisa mari sezvo mazhinji acho asinga gadziriswe.
Vaya vanoisa mari vanofarira kuisa mari muICOs. Ivo vanogona kutarisa ICOs zviyero pawebhusaiti yedu vobva vadyara sezvo zvichivabatsira kutsvaga zvakanyanya Active, Pre &. Iyo inouya ICO's.
ICO, kana Initial Coin Inopa, dzimwe nguva inonziwo "chiratidzo chekutengesa" kana "yekutanga chiratidzo chinopihwa", itsika yekuwandisa mari kune blockchain mapurojekiti, uko cryptocurrency kana chiratidzo chinopihwa kune vekutanga vatyairi, vasati vanyorwa pamusika wakafara. , sekushandurana.
Izvo zvinokurudzirwa kuti uite zvakanyanya kutsvagisa zvakapoteredza chirongwa usati waisa mari. Izvi zvinosanganisira kuverenga iyo whitepaper, kushanda kana ICO ichipa chaiyo-yepasirese kukosha uye kutsvagisa timu zvakadzama.
Heano maitiro aunogona kutora chikamu muICO:
Iva wega inokodzera cryptocurrency iyo ICO iri kugamuchira sekudyara.
Ita shuwa kuti iyo cryptocurrency chikwama inoenderana neICO chiratidzo.
Katatu tarisa iyo dhipoziti kero kubva kumahofisi masosi.
Chii chinonzi ICO Soft Cap?
ICO yazadzisa chinangwa chayo kana cap yayo nyoro yasvika. Iyo kapu yakapfava ishoma shoma inodiwa kuti chirongwa chienderere mberi.
Chii chinonzi ICO Hard Cap?
Mazhinji maICO anozovewo nekaputi yakaoma, inova ndiyo yakanyanya mari yavanogamuchira mukudyara. Kana iyo ICO ikatadza kusvika pairi yakapfava cap, mazhinji maICO anodzosera mari kune vanoita mari.
Chii chinonzi ICO Zviratidzo?
Zviratidzo zvinogona kutsanangurwa semari ye crypto yakapihwa kukambani inobhadharira mari chirongwa kuburikidza neICOs, iyo inogona kunge iri yekushandisa yekubhadhara (mongeti yemari) chete muchirongwa checosystem icho chinopa maficha akafanana nemari yesimbi, asi muridzi wawo anewo mamwe mvumo mumambure , senge kodzero yekuvhota, kodzero yekuwana chikamu, kodzero yechikamu chemari, nezvimwe. Zviratidzo zvakagadzirwa se "smart" zvibvumirano zvinoenderana neEthereum kana Wave blockchain network. Zviratidzo zvinogona kuzivikanwa semidziyo yezvemari kana chinhu (kana masevhisi) anogona kushandiswa nemuridzi wematani (zvinoshandiswa), zvinoenderana nehunhu hweiyo cryptocurrency.
Chii chinonzi ICO Whitepaper?
ICO Whitepaper igwaro rakapihwa nesangano / kambani inoburitsa matokeni kuitira kuti iwane mari yekutsigira chirongwa chakati. Iko hakuna zviri pamutemo zvinotsanangurwa zvirimo uye mamiriro ayo mumwe whitepaper anofanirwa kusangana. Gwaro iri rinowanzo kuve neruzivo nezve nzira yekuburitsa matokeni, ruzivo nezve chirongwa chinozoitwa, pamwe nechikwata chiri kuseri kwechirongwa.
Inotanga Sei Mari Inopa (ICO) Inoshanda?
ICO inotanga nerumwe rudzi rwechirevo, unowanzodaidzwa kuti chena bepa rinodonongodza ruzivo rwechirongwa, chirongwa cheprojekti, Bhajeti uye zvinangwa uye dzimwe nhaurirano nezvekuti mari kana zviratidzo zvichagovewa sei. (Kazhinji zviratidzo zvinopihwa kumiririra muridzi weprojekiti kana rakazvimiririra rakazvimiririra sangano, asi mari yemari inowanzo kuve mari chivakwa.)
Mazhinji maICO anoona huwandu hwechiratidzo kana mari inopihwa isati yatengeswa. Vashandisi vanotenga pakutanga vanogona kupihwa mazwi akasarudzika nekubhadhara mutengo wakaderera pamari. Asi mitengo inogona kuchinja, uye kana vanhu vazhinji vakatenga, unogona kupedzisira uine mashoma ma tokeni.
Mamwe maICO ane chinangwa chakati chekutsvaga mari uye anogona kuchengeta mutengo wakatarwa mukutengesa kwavo kwese. Vamwe vanochengeta kupihwa kwakarongeka uye kugadzirisa mutengo zvichienderana nezvinodiwa, kuwedzera zvakanyanya sezvinobvira uye kune zvekare izvo zvinopa kuendesa kune simba kana mari nyowani inogadzirwa kana mumwe munhu atenga imwe.
Dzakawanda ICO dzinotangwa zvakazvimiririra, inotarisirwa nemuviri unopa pane webhusaiti kana chikuva. Izvi zvakaitika nekuti zvinopihwa zvakavimbika zvinowanzo goneswa neshanduko kana sevhisi yekutengesa iyo inogona kubvumidza vatyairi dzimwe nzira dzekuchengetedza vanopokana.
Musiyano Mukuru pakati peICO neIPO
Chipo chekutanga cheveruzhinji (IPO) chiitiko chakafanana neICO umo muzvinashawo anowana zvikamu muhuyo hwekambani. Izvi zvinopesana neICO, umo ma tokeni ekutengesa akatengwa nevane mari anogona kuwedzera kukosha kana bhizinesi richishanda nemazvo.
Kune ICOs, varimi vanotenga matsva madhijitari nedonzvo rekuita purofiti kana kukosha kwacho kuchikwira. Izvi zvakafanana nemunhu anowana purofiti kana sitoko yavanotenga pamusika wekutengesa ichikwira. ICO yakasiyana nekutenga masheya pamusika wemasheya nekuti kana iwe ukaisa mari mumatokeni matsva, haugone kugovana muridzi wekambani.
Nei ICO yekubhadhara mari yakakurumbira?
ICO idhijitari crypto vhezheni yefundfunding. Yakave ichishandiswa nemazvo kubhadhara mari yemadhora, ayo mazuva ano akabudirira zvakanyanya uye akaunganidza huwandu hwakawanda hwemari hwaisazombokwanisa kuita kuburikidza neyakajairwa kuwanda mari. Heano mimwe yemienzaniso yeakabudirira mapurojekiti eICO ekubhadhara mari: Stratis, Ethereum, Iota, Viberate & Edgeless
Maitiro ekushandisa sei ICO?
Makambani eCrypto-currency anoda kuunganidza mari kuburikidza neICO anoda kupa rumwe ruzivo, kusanganisira kurondedzerwa kweprojekti, chinangwa cheiyo projekiti, izvo zvinodiwa pakudyara, chikamu chemakosi ayo kambani ichachengeta, iyo nguva chirongwa cheICO uye mhando yemari chaiyo inogamuchirwa neprojekti.
Zvakakosha here kutora chikamu muICO?
Chinhu chikuru ndechekuti unzwisise kuti urikuisa mari muzano remumwe munhu, izvo zvingangodaro zvisina kukodzera. Kune rimwe divi, iyo chikamu che cryptocurrency chiri kuwedzera izvozvi. Iyi inzvimbo inovimbisa yemihoro muhombe, uye kana iwe usiri kuda kupotsa mukana enda-mberi nhasi.
Kuisa mari muICO
ICO Investment ine zvese zvakakosha zvakanakira nekuipira zvichienzaniswa neInvestment zvakatonyorwa cryptocurrency. Nekudaro, vatengi vane hunyanzvi, vanotenga mari nyowani muICO nekukurumidza sezvazvinogona, vanogona kutarisira kukwira kwekukwira kwekukosha. Semuenzaniso, avo vakaisa mari muEthereum ICO muna 2014 vakaita purofiti yakakura. Mukati memazuva makumi mana nemaviri, mamirioni gumi nemasere emadhora ekuAmerica akaiswa mari. Ether yakatengeswa muICO nemasendi makumi matatu. Kunyangwe neyekutanga rondedzero pamusika wekutengesa, vatengesi vakafara nezve mazana mazhinji muzana kuwedzera kukosha. Nhasi Ethereum's cryptocurrency Ether ndiyo yechitatu mari yakasimba pamusika uye parizvino iri kutengeswa pamadhora zana.
Zvakanakira ICO Investment
ICOs dzinovimbisa kunyanya yakakwira mikana yekukunda
Chero ani anotsvaga ICOs anodzidza nezve akawanda ekushandisa mukana weBlockchain tekinoroji
Vashandi vanokonzera kugadzirwa kwekrispto-bhizinesi nzvimbo
Kutora chikamu muICOs zviri nyore
Zvakaipira ICO Investment
Mhosva zhinji dzekubiridzira dzinoita kuti kutora chikamu muICO kuve nenjodzi zvakanyanya
Chikwama chinosungirwa kutora chikamu
A-pre-research inokurudzirwa zvakanyanya, inoda nguva yakawanda
Mumusika unoenderera nebere, zvinonyanya kuomera ma Startups kuzvisimbisa
Heano maitiro aungaisa mari muICO:
Kuisa mari muI ICO, unofanirwa kupururudza kuburikidza newebsite yedu kuti uwane mapurojekiti anogona kuvimbisa anoda mari. Paunenge iwe wawana runyorwa rwezvirongwa uko iwe kwaunogona kuona yako investa, iwe unofanirwa kuenda kune yavo webhusaiti kuti utenge ayo ma tokeni.
Kutenga kwe cryptocurrency
Tichifunga kuti ICO inobatwa mumakristcheni, uye kwete muFiat mari, zvinodikanwa kuchinjanisa mari yeiyo cryptocurrency (kunyanya Etherium).
Chinjana cryptocurrency kuchirongwa uye gamuchira simbiso yekutora chikamu
Kuwana mari yeprojekti pane crypto chikwama
Kubviswa kwemari kune iyo crypto exchange
Kana iyo mitengo inokodzera mushambadzi yasvika, kutengeswa nekugadziriswa kwemhedzisiro yemari kunoitwa
ICO Chikamu Chekutengesa
Zvikamu zvekutengesa zveICO zvinosanganisira maitiro anotarisa mune nyaya yekutsvaga mari uye kana zvinhu zvemadhijitari zvapihwa mumusika semablockchains akafanana nezvikamu zvinonyanya kuzivikanwa sematanho anopiwa pamutengo wakadzikiswa uyo unogona kuchinjaniswa kune ico cryptocurrency rondedzero neyekutanga investor panguva yekutanga chikamu cheimwe chirongwa. Isu tinopa iyo pamusoro ico rondedzero. Heano matatu matatu ICO Kutengesa Matanho:
Phase I PRIVATE SALE
Phase III BOKA RATENGESWA
Nekudaro, hapana seti yemitemo yakaumbwa inosarudza chimiro chekupisa crypto ico kukura. Pakutanga, panguva yeChikamu chekutanga, kutengeswa kwepamberi uye kwepachivande kunoziviswa ndipo chete ndipo pachikamu chechipiri II chinotanga kuchinjisa zvinyorwa zvepamberi uye zvozouya Chikamu chechitatu apo tokeni dzakagadzirira kutenga neruzhinji kuti dziite mari yakawanda.
Yakanakisa Iri kuuya ICO Chinyorwa:
Tine rinouya ICO runyorwa iyo ichave ichishanda munguva pfupi. Tine chikamu chakasiyana kuratidza maI ICO achangoburwa.
Anoshanda ICO Rondedzero:
Kuti uwane runyorwa rweakanakisa eICO anoshanda, haufanire kuenda kuburikidza nemawebhusaiti akasiyana siyana izvozvi. Isu tinopa iyo rondedzero iyo inowanzo gadziridzwa.
Pre-ICOs yakachipa uye zvakare iri sarudzo yakanaka yekukurumidza purofiti. Mazuva ano, Ivo vanozivikanwa pakati pevatengesi kuti vawane zvimwe. Saka, tarisa pane yedu Pre-ICO runyorwa nhasi.
Nyora ICO yako nhasi pawebhusaiti yedu uye usvike zviuru zvevanoisa mari kubva kutenderera pasirese uye zvakare, ikozvino tinopa iyo inokurumidza KYC sevhisi yeICO. Zadza fomu redu rekuonana nhasi uye tichakubata mumaawa makumi maviri nemana anotevera.